I-Comic Book Penciller - Inkcazelo yeJob kunye neNkqubo yokuSebenza
Yintoni endiyidinga ukuba yi-Comic Book Penciller
Ngumsebenzi wepenciller ukuthatha isicatshulwa seqhiya kwaye uyinike ifomu. Ngamanye amaxesha isicatshulwa sichaza kakuhle indlela yonke into okufanele ibuke ngayo. Ngamanye amaxesha, kukho kuphela isiphakamiso esisisiseko malunga nokuba yiyiphi into ekumele ibe nayo kweli phepha. Kwimeko nayiphi na into, ngumsebenzi wepenciller ukuthatha loo mazwi aze abanike ubomi ngendlela eqondakalayo, uhambisa ibali kunye nekhwalithi eqhubekayo.
Iipenciller eziphumelelayo zifuna:
I-Artistic Yazi Njani - Umculi weencwadi eziqingqiweyo kufuneka azi indlela yokudweba! Funda izifundo ezinkulu ezinjengeKirby, Lee , kunye neCassaday . Ziqhelanise imihla ngemihla, ufunde i-anatomy yabantu kunye nezakhiwo. Thatha iiklasi okanye uthenge incwadi. Phuma apho uze udwebe!
Yenza Into Engqondweni Yakho - Umculi kufuneka akwazi ukubona into ethile, uze uyibeke phantsi kwiphepha. Maxa wambi akulula kangangoko, kodwa kufuneka ukwazi ukudala imifanekiso kwiinkcazo okanye kumfanekiso engqondweni yakho.
Ukunyaniseka - Izinto ziguqula lonke ixesha. Ngamanye amaxesha kufuneka uqhube kunye neempompo kwaye utshintshe izinto phakathi. Oku kungahlukileyo ukuba ungumdali oyedwa okanye u-self-publishing, kodwa kwihlabathi lomculi ozimele, kufuneka ube nako ukutshintsha izinto kubaxumi bakho.
Ukuziphatha kobugcisa - Ukukwazi ukwenza umsebenzi xa uthe uya kwenziwa kuya kuhamba indlela ende yokufumana imisebenzi kwixesha elizayo.
Intelligent Mindset - Ukudala incwadi yamahlaya yintsebenziswano phakathi komlobi, umculi, umhleli kunye neqela lonke. Zikulungele ukuva iingcamango nokuziguqula kumbono jikelele weprojekthi. Yima umgangatho wakho, nangona ixabiso lakho lijongene.
Ukubambisana - Kufuneka uhlale ungumculi. Ukuba umlingiswa utshintshe indlela abajonga kuyo yonke i-comic, kwaye akusiyo inhloso, umfundi wakho uya kudideka. Izinto zifuna ukujonga kakuhle kwaye ziqikelele. Ukuphuhlisa isitayela esivumelanayo (enethemba elilungileyo) liya kuhamba indlela ende ukukwenza ube ngumculi ongcono.
Imifanekiso yokudweba - Izinto ezisisiseko zezi ipensile eqhelekileyo. Ukuqala, awuyi kufuna okungaphezulu kweleyo. Xa unesiseko esisezantsi, kukho izinto ezininzi onokuzifaka kuyo. Iipalisi, iintlobo ezahlukeneyo zamapensele, iipencilisi zemishini, kunye neentlobo ezininzi zeepalisi zisebenzisa ipenseli eluhlaza obomvu, njengoko iphela xa ikopisha. Ungasebenzisa ngokoqobo malunga nantoni na eshiya uphawu, kodwa into ebonakalayo yokudweba ikhona ipensela.
IPhepha- kwakhona, xa uqala, nawaphi na iphepha liya kuyenza ukuze ufumane izinto ezisiseko. Xa uhamba ukudala iincwadi zee-comic, kunjalo ke, abaninzi basebenzise oko kubizwa ngokuba yiBhodi yeBristol okanye iPhepha leBristol, iphepha le-11 X 17 yesayizi yephepha le-multi-ply iphepha elinesithuba esingu-10 X. Oku kuninzi kumgangatho woshishino.
I-Sketch Book - Ukuba ne-studio ephathekayo ukukhangela imibono xa umntu ephefumlelweyo ayixabanga. Awukwazi ukuba yintoni into eya kuqakraza, kwaye ukwazi ukuyihla ngokukhawuleza iya kuhamba ixesha elide ekuncedeni ukuba uhlale udala.
Indawo yokusebenzela - Uninzi lwabaculi bezakhono basebenzisa uhlobo oluthile lwetafile yobugcisa. Itafile iyakwazi ukutshintshwa kwii-angles ezahlukileyo ukwenza umzobo ukhululeke ngakumbi. Abanye banesiphelo se-opaque okanye seglasi kunye nokukhanya okuphantsi kwayo kwaye baziwa ngokuba "iibhodi ezikhanyayo." Oku kuvumela umculi ukuba enze imidwebo embi kwiphepha elincinci, uze ulandelele umsebenzi wabo kwiphepha le-nicer yomveliso ogqityiweyo. Nantoni na oyenzayo, ufuna indawo yokuhlala. Ukuba nesithuba esivumelanayo kuya kukunceda wenze umsebenzi oqhubekayo.
Iimpawu zoBume - Oku kungathatha iifom ezininzi, enye yezona ziqhelekileyo ziza kuba yi-intanethi. Ngaba kufuneka udwebe iWorld State Building? Google uze ufumane umfanekiso omhle. Abaculi abaninzi baneencwadi ze-anatomy ukubona indlela umzimba ukhangele ngayo kwiindawo ezahlukeneyo. Abanye bathatha imifanekiso yeepaneli ezicetywayo ukuze babone indlela ukukhanya kuchaphazela ngayo amanani kunye nabalinganiswa.
Ikhompyuter - Abaninzi abaculi basebenzisa iindlela zedijithali ekudaleni amahlaya. Oku kusenokungabi kwisigaba sokubhalisa nge-se, kodwa ngokuqhelekileyo kusetyenziswa kwiyinki, imibala kunye nokubhala. Ekubeni ama-artists amaninzi enza iindidi ezahlukahlukeneyo zenkqubo, kuya kuba bubulumko ukufunda ezinye zezi zakhono, ukuba nje ubone ukuba abanye abadali bacinga njani.
Ithebhulethi yeWacom - Ezi zixhobo ezintsha ziba yingxenye ebalulekileyo yokudala ii-comics kwiikhomputha. I-tablet ebonakalayo ikuvumela ukuba udwebe ngqo kwinkqubo yekhompyutha. It isetyenziswe kwimimandla eyahlukeneyo yokudalwa kwamahlaya, ukusuka kwiyinki, kunye nombala, ukuze udwebe ii-comics. Ii-technophile ezinzulu ziya kufuna ukutyalo kule fowuni.
Scanner - Njengoko iidyhukhi ezi zihlala zigqityiwe ngamanqaku, oku kufuneka kubekho, kodwa kuya kuhlala kwizixhobo ezikhethiweyo ngoku. Ukukhangela umsebenzi wakho kuzo kunceda izinto ezininzi. Okokuqala kuya kukuvumela ukuba uyithumele ngokubhaliweyo kwabanye abadali elinde ukugqiba inkqubo yoonwabo. Kuya kunika ingxelo yangoku kwangoko kubalobi kunye nabahleli, okwenza iphrojekthi iqhubeke phambili. Iya kugcina kwakhona imifanekiso yoqobo yokugcina okanye ukuthengiswa.
Iwebhusayithi - Njengoko umsebenzi wakho ubonakala ngokubonakalayo, kuya kuba yinto ekugqibeleni ukuba ube newebhusayithi. Oku kunokufeza izinto ezininzi. Kuya kukunika indlela yokudibanisa nabalandeli, ukubonelela ngemiboniso yomsebenzi wakho kubaqeshi abangabakho, kwaye bakwazi ukuvakalisa umsebenzi wakho, izinto zokuthengisa kunye neenkonzo.
Amanye aBaqhi beNcwadi abaDumileyo
Ngoko Ufuna Ukuba Yi-Comic Book Penciller?
Ukudweba! Funda iziseko ze-anatomy kunye nezakhiwo. Oku kuya kukunceda uhlakulele isitayela sakho sobugcisa. Zama iindlela ezahlukeneyo kwaye ungahlali kwindlela enye. Yenza ubuchule kwaye usebenzise ngokusemandleni akho. Ukuba ngumculi uninzi lomsebenzi onzima kwaye uthatha ukuzinikezela, ukuzimisela kunye nexesha lokuhlaziya izakhono zakho.
Iingcaphuno ezivela kwiPenic Book Pencillers
Ukusuka kuJim Lee - Superstar umculi wencwadi ye-X-Men, Batman, i-Divine Right, i-WildC.ATS kunye nabanye abaninzi. Ukususela kwingxoxo-ntetho kwi-Newsarama efunyenwe kwi-newsstand ye-Art of Jim Lee:
Mayelana nokudweba iBatman kunye nezitayela - "Ewe, ndiyathanda ukuzama izitayela ezahlukeneyo - nje ukuzonwabisa.
Kodwa xa kuhla ukuya kusetyenzisweni kwiprojekthi - ndizama kwaye ndisebenzise isitayela esilungele ngokufanelekileyo. Ngolunye usuku, ndinethemba lokupenda iphrojekthi - yinto yokufumana iphrojekthi efanelekileyo. "
I-style classic yinto endiziva ndikhululekile ngayo kunye neyona nto ihamba phambili engqondweni yam. Ngokuqinisekileyo, ndiyakwenza iBatman ngendlela engabonakaliyo, isicatshulwa kodwa indlela leyo isebenza ngayo abantu abanjengePoison Ivy okanye uRobin okanye U-Harley Quinn usebenzisa imizekelo eyahlukileyo. Loo nto yathi, ndicinga ukuba kuya kuba neentlobo ezithengisayo kubalandeli bakaBatman kwindlela yokucinga.
Ukusuka kuDarick Robertson - Umculi we-Transmetropolitan kunye nabafana. Ukususela kwingxoxo kwi-Silver Bullet Books Books 404.
Ngokumalunga nomzamo wokusebenzisana - "Ewe, kwimeko (Abafana) yayingaphezulu komgudu wokusebenzisana, xa andizange ndikulindele. Ndiqhuba yonke into ngoGarth kuba ndifuna ngokwenene ukuzisa umbono wakhe kule ncwadi ngokusemandleni endikwaziyo, kuba ungokoqobo kwaye phambili kwishedyuli kwaye kunjalo, ngoko ke phakathi kwethu bobabini sinokwenza ngobugcisa incwadi iqela. Ndiziva ngathi inxaxheba yam iqela kukuqinisekisa ukuba ufuna ntoni yinto ayifumanayo. Ndiyinkinga ngokwam kwaye emva kweso sizathu, uTony Avina, umgcini-mhlophe, uza kungena kwaye uphatha umsebenzi wam ngenhlonipho efanayo ndiyiphatha ngayo uGarth. UTony ekuqinisekiseni ukuba ndifumana oko ndiyifunayo, ndiqinisekisa ukuba uGarth ufumana oko akufunayo ... Ndicinga ukuba ekugqibeleni lenza ukhangelelwano oluhambelana nencwadi. Kuze kube ngoku sele kunamanzi.
Sinobambiswano. Wonke umntu ukhangelelana nantoni na omnye, kwaye sonke sithetha omnye komnye, into enhle kuba kukho ezininzi iiprojekthi ozifumana uzisebenzisayo. "
Imithombo yamandulo kwiPersi okanye i-Iranian History
Ukuqonda iTheory Functionalist Theory
Iingoma eziyi-10 eziphezulu ze-Rock ze-1990
Yintoni Umfundi ongenamhlanje?
Ziqhelise ekunqumeni i-Clutter